တစ်စုံတစ်ဦးကတွင်း Emelja အတွက်ဖမ်းမိ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တစ်စုံတစ်ဦးကတွင်း Emelja အတွက်ဖမ်းမိ?
သူဖမ်းမိသောကွောငျ့ Emel, ငွူစူခံရ အပေါက်ပိုက် ရိုးရှင်းလျက်, စပီကာနှင့်ဆန္ဒ-ပြည့်စုံဘူး။ ဤသည်ယခုအချိန်တွင်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် Yemelya အကြောင်းကိုနတ်သမီးပုံပြင်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်မီးဖိုသို့သွားပြီးသူကိုယ်တိုင်ရေမသယ်ခဲ့၊ ထင်းမဖြတ်ခဲ့ပါ။ ပိုက်အားလုံးသည်သူ၏ဆန္ဒပြည့်စုံခဲ့သည်။
quote; ပိုက် - ဒါကငါတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Emelya သည်တွင်းထဲရှိငါးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းမိပြီးရုတ်တရက်သူသည်ပိုက်ကိုဖမ်းမိသည်။ မရိုးရှင်းပေမယ့်မှော်, မဆိုအလိုဆန္ဒပြည့်စုံသော။ သူကသူမ၏တောင်းဆိုချက်ကိုမှာသွားကြကုန်အံ့။ ထို့နောက်သူ့အတွက်အရာအားလုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Emelya သည်ရိုးရှင်းပြီးပျင်းရိသည် (quot; Emelyanquot ဟူသောအမည်ကိုလက်တင်ဘာသာမှပြန်ဆိုသည်။ Hardworking quot;) ဟုဆိုသော်ငြားလိမ္မာပါးနပ်ပြီးကြံရည်ဖန်ရည်ရှိမှုရှိသည်။ သူသည်မိမိ၏မတော်တဆကံတရားကိုသူ၏အားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်သူ၏ialကရာဇ်သမီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမှော်ဤသူ၌ကူညီပေးခဲ့သည်။ ပိုက်ဘယ်သူသည်မိမိလက်ဗလာနှင့်အတူတွင်း၌ဖမ်းမိ။
ရုရှားရိုးရာပုံပြင်၏သူရဲကောင်း Emelya သည်အလွန်ပျင်းရိသည်။ တွင်းထဲသို့ပိုက်ကိုဖမ်းမိသည်။ သူသည်မှော်ဆရာဖြစ်ပြီးသူမကိုလွှတ်ပေးရန်ပြောခဲ့သည်၊ ထို့နောက်သူသည်သူ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Emelya သည်အောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမမှော်စကားများသာပြောခဲ့သည်။
ပိုက်တွင်းလူမိုက် Emelya အတွက်ဖမ်းမိ။
ဒါဟာအတိအကျတစ်ဦးနင်္လာမှသောကြာ Denk, မတစ်ပါတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
quote; ပိုက် dictatesquot; - ထိုကဲ့သို့သောနတ်သမီးပုံပြင်ရှိတယ်။
ရုံတစျခုကောင်လေး Emelja ပြုသောအမှုရှိ၏။
Quote လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားရိုးရာပုံပြင်ဖတ်ပြီးနောက်, ယင်းပိုက် veleniyuquot သဖြင့်, ကျနော်တို့ Emelya တွင်းထဲမှာဖမ်းမိသင်သိရ ပိုက်ကားကိုမရိုးရှင်းပေမယ့်မှော်, ရှိသမျှသည်မိမိအလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း။ ဒါဟာမှော်စကားလုံးများကိုသာဤသို့ပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည်:
ကောင်းပြီ, ရုရှားရိုးရာပုံပြင် Quote ၏ပိုက် veleniyuquot သဖြင့်, အများအပြားမှလူသိဒါကြောင့်မေးခွန်းအဖြေကိုသိသာသည်ကသည်မဟုတ်လော
Slacker Emelya ပဉ္စလက်ဖမ်းမိ ပိုက် တွင်း၌တည်၏။ အံ့ဖွယ်ပိုက်များ၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ပျင်းရိ Quote ကျေးဇူးတင်ပြန်လာသော; barskiquot အတွက်; ။ မဆိုအလိုဆန္ဒ Emeli, ထိုပိုက်၏ behest မှာချက်ချင်းကွပ်မျက်ခံရ။
ဇွန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရေနဲရာထဲက Emel မှရှေးဟောင်း Norse ဒဏ္ဍာရီ, အဆိုအရသည် CAM ကြံ့ pecked !!! Emelja နတ်ဘုရားနှင့်အတူပမာဏမှာတူညီဖြစ်လာခဲ့သည်ရရှိလာတဲ့အပေါင်းတို့သည်သူ၏ဆန္ဒကိုစစ်မှန်တဲ့လာသကဲ့သို့, သူန့်အသတ်အလိုဆန္ဒများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် !!! :): ) :)
Emelya အမည်ရှိလူငယ်တစ်ဦးအချင်းလူသား, နာမည်ကြီးရုရှားနတ်သမီးပုံပြင် Quote ၏အဓိကသူရဲကောင်း၏ပိုက် veleniyuquot သဖြင့်, ယင်းအပေါက်တစ်ပိုက်ဖမ်းရန်ကံကောင်း။ ဤဖြစ်ရပ်သည်သူလိုချင်သမျှ, သူ့ကိုအားလုံးလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, Yemelyan ဘဝကိုလှည့်။
Quote; ဒါဟာငါ့အအလိုတော်ရှိ၏, ထိုပိုက် veleniyuquot တလျှောက်; .. တစ်ပိုက်ဖမ်းရန်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အိပ်မက်မက်မမူကားအဘယ်သူ) ဒါပေမဲ့တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်, ငါကအရမ်းသနားစရာထင်ကဒီ Emelya ယင်းပိုက်၏သွားကြကုန်အံ့ဖို့အချိန်မပေးခဲ့ပါဘူးဖြစ်ပါသည်, မီးဖိုပေါ်မှာလှဲနှင့်? ရွာမှာပေါ်ကလူကိုမြင်ရရဲ့တစ်ဦး drive ကိုသွားပါစေ! ပြီးတော့လာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးရဲ့မင်းသမီးလေးကသူ့ကိုပေးပါ။ Quote of; knyaziquot အတွက်ရွှံ့; သို့သော်။
Emelya တွင်းထဲမှာဖမ်းမိ ပိုက်။ သူသည်ဤအကျင့်စရိုက်ကသူ့လက်ဗလာနဲ့ပိုက်ဖမ်းမိကြောင့်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မှော်။ သူမသည်မိမိအလိုဆန္ဒ Emelja သီဆိုခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် Tsar ရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ယင်းပိုက် veleniyuquot သဖြင့်,; ဒါဟာပုံပြင် Quote ဟုခေါ်သည်နှင့်စာလုံးပေါင်း Quote ပြုတတ်ကြ၏; ငါ့အပြုမူမှု၌, Quote ... မှော်များကလျှင်သကဲ့သို့, နှင့်သူ၏ဆန္ဒမပြည့်စုံသည်။
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,220 စက္ကန့်ကျော် Generate ။